ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “မှားရက်ပလေ”
အော်... ဒွတ်ခ.... ဒီက အယ်ဒီတာတွေကလည်း ဖြစ်နိုင်လား၊ မဖြစ်နိုင်လား ဆိုတာတောင် မတွေးတတ်ကြတော့ဘူးလား....မသိ....
OMG!..Today Editor and AP Editor, how come Government's ministar ( minister) can act asalawer of Opposition Leader..LOL! :D:D:D
မနေ့ က Straits Times မှာလည်း မှားနေတယ်လေ။ ထိုင်းကဝင်ရောက်စွက်ဖက်နေတယ်လို့ မြန်မာသတင်းစာကြေငြာချက်ကို သူကပြန်ကြေညာတယ်။ အဲဒီသတင်းရဲ့ ခေါင်းစဉ်ကို ဒီလိုပေးထားတယ်လေ- "Myanmar is meddling" တဲ့။ တော်တော်အူကြောင်ကြောင်ဖြစ်သွားတယ်။
ညဘက် ပြန်ဖတ်တော့မှ "Thailand is meddling" ပြန်ဖြစ်သွားတယ်။
“ရှေ့နေကယ်မှ ထောင်လုံးလုံးကျ” ဆိုတဲ့ စကားပုံရှိတယ်လေ။ အဲသလို “ရှေ့နေ”နဲ့ “ဝှေ့နေ”နဲ့ မှားတဲ့ကိစ္စမျိုးမှာ သုံးတဲ့စကားပုံထင်တယ်။း-)
Today Paper has edited the wrong one. Lukily you have posted the wrong one.
How come they become reporter and editor.
ဒါဆို အန်ကယ် ဦးတင်ဦးကို ဘာလို့
အဲဒီသတင်း အစ်မလဲ ဖတ်လိုက်ရတယ် ကိုပေါရေ။ စောစောစီးစီး စဉ်းစားလိုက်တာ ခေါင်းတောင် တော်တော်ချာချာလည်သွားသေးတယ်။ ဖြစ်မှဖြစ်ရလို့။